डचटाउन सीआईडी ​​• डचटाउनस्टा.लि. • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन कम्युनिटी ईम्प्रूव्हिमेन्ट जिल्ला एक राजनीतिक उपविभाग हो जसले यस भित्रको घर जग्गामा विशेष कर निर्धारण संकलन गर्दछ सीमाहरू। सानो कर जिल्लामा सुधार, सुन्दरता, सुरक्षा, सुरक्षा, र अधिक सम्बन्धित सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
धेरै समर्पित स्वयंसेवकहरू र समुदाय नेताहरूको सहयोगमा, डचटाउन सीआईडी ​​आधिकारिक रूपमा स्थापना भएको थियो सेन्ट लुइस अध्यादेश को शहर 70559 जून 9th, २०१ 2017 मा, र जुलाई २१, २०१ effective मा प्रभावकारी भयो। डचटाउन सीआईडी ​​सीआईडी ​​पदचिह्न भित्र by१% भन्दा बढी सम्पत्ति मालिकहरूले पठाएको याचिकाको परिसंचरण र अनुमोदनको माध्यमबाट सिर्जना गरिएको थियो।
CID एक द्वारा निर्देशित छ निदेशक बोर्ड CID पदचिन्ह भित्रका बासिन्दाहरू, व्यवसाय मालिकहरू, र सम्पत्ति मालिकहरू मिलेर बनेका छन्। पब्लिक बोर्ड बैठक प्रत्येक महिनाको चौथो मंगलबार बस्छ। भ्रमण गर्नुहोस् डचटाउन क्यालेन्डर वा डचटाउनस्टाईल फेसबुक पृष्ठ बैठक समय र स्थान मा नवीनतम जानकारी को लागी।
भ्रमणको कागजात पृष्ठ लागि मिनेट मिनेट, नोटिस, एजेन्डा, र रिपोर्ट.
बोर्डबाट इनपुट प्राप्त गर्दछ डचटाउन समितिहरु सुरक्षा, पदोन्नती, र भौतिक सम्पत्ति जस्ता मुद्दाहरूको बारेमा। कमिटीहरू सबैका लागि खुला छन्, र दुवै मुद्दाहरूमा काम गर्दछन् सीआईडी ​​पदचिह्न भित्र र पछाडि। समितिमा सम्मिलित हुने बारेमा बढि जान्नुहोस्.
आगामी CID घटनाहरू मा अधिक घटनाहरू dutchtownstl.org/cocolate
घटनामा जनवरी २th @ 20:6 अपराह्न
अधिक जानकारी डचटाउन डिजाइन समिति बैठक
घटनामा 22 जनवरी @ बिहान 11:00 बजे
अधिक जानकारी Meramec जादू
अधिक जानकारी डचटाउन सीआईडी ​​बोर्ड निर्देशकहरूको बैठक
अधिक जानकारी डचटाउन आर्थिक महत्त्व समिति बैठक
सबै CID घटनाहरू हेर्नुहोस्
डचटाउन सीआईडी ​​समाचार थप CID अपडेटहरू फेला पार्नुहोस् dutchtownstl.org/news
डचटाउन गर्मी Vibes
प्रकाशित 15th सक्छ, 2021
ईमेल मार्फत साझेदारी गर्नुहोस्
मिति बचत गर्नुहोस्! हामीलाई डाउनटाउन डचटाउन मा सामेल हुनुहोस् शनिबार, जून 5th लागि डचटाउन गर्मी Vibes, एक पड़ोसी चाड र समुदाय घटना! डचटाउन गर्मी Vibes द्वारा प्रस्तुत छ क्रफोर्ड-बट्ज बीमा.
बाँकी "डचटाउन गर्मी ग्रीस" पढ्नुहोस्
डचटाउन सीआईडी ​​२०२० वार्षिक रिपोर्ट
प्रकाशित जनवरी 19th, 2021
डचटाउन समुदाय सुधार जिल्लाले यसको जारी गर्‍यो 2020 वार्षिक रिपोर्ट। रिपोर्टले जून th०, २०२० मा अन्त्य हुने बाह्र महिना अवधिलाई समेट्छ।
बाँकी "डचटाउन सीआईडी ​​२०२० वार्षिक रिपोर्ट" पढ्नुहोस्
डचटाउन सीआईडी ​​खोज्नुहोस्
थप डचटाउन सीआईडीमा